तालिवानको त्यो निर्ममताः हत्यापछि २ दिनसम्म पोलमा झुण्ड्याइएका थिए पूर्वराष्ट्रपति नाजिबुल्ला « रिपोर्टर्स नेपाल
समाचार विश्लेषण । डा. मोहम्मद नाजिबुल्ला रुसको साथ पाएका अफगानिस्तानका नेता थिए । सन् १९८६ देखि १९९२ मा अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बनेका उनी सत्तामा रहँदा रुसले फौज फिर्ता गर्न थाल्यो । आफूपक्षधर नाजिबुल्ला राष्ट्रपति रहेको र उनलाई नै विदेशी फौज फिर्ताको जस दिने गरी रुसले उक्त रणनीति चालेको थियो । अर्कोतर्फ, शितयुद्धले विश्व शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएपछि रुस अफगानिस्तानमा थप नोक्शानी भोग्न चाहिरहेको थिएन ।
काबुलस्थित भारतीय दूतावासमा शरण दिन भारतले पनि स्वीकार गरेन । जसका कारण उनी संयुक्तराष्ट्रसंघको काबुलस्थित भवनमा शरण लिन पुगेका थिए । भारतले सन् १९९४ मा एम. के. भद्रकुमारलाई दूतका रुपमा पठाएर तत्कालीन अफगानिस्तानका रक्षामनत्री अहमद शाह मसुदसँग वार्ता गर्यो । मसुदसँगको वार्तामा भारतसम्म जान दिने गरी भएको वार्ता असफल भए । मसुद तयार भएनन् ।
तालिवान काबुल पसे । २६ सेम्टेम्बर सन् १९९६ मा नाजिबुल्ला र उनका भाई साहपुरलाई राष्ट्रसंघको भवन परिसरभित्र घिसारेर निकाले । दुवैको निर्ममतापूर्वक हत्या गरे । उनीहरुको शवलाई ट्रकमा राखेर घिसारे । उनीहरुको शव ट्राफिक लाइटको पोलमा झुण्ड्याइयो । दुई दिनसम्म शव निकाल्न दिइएन । यसका लागि राष्ट्रसंघले ठूलो प्रयास गरेर सफलता हासिल गरेको थियो ।
गणेशमानको प्रधानमन्त्री त्याग
काठमाडौं, २ असोज । यो त्यही जीप हो जसमा चढेर गणेशमान सिंह जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डरका
फुटेकाहरुको हविगत: विगतदेखि वर्तमानसम्म
काठमाडौं, १ भदौ । देशमा राजनीतिक दलहरु फुट्ने र जुट्ने क्रम २०४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र